Semalt: Botnet Traffic Guideline - Nzira Yokudzivisa
Bhoti inoita 'zombie kombiyuta' inoita sevanhu chaivo. Bhoti inogona kuvhara sevhisi kana kuguma kwevashandi. Semuenzaniso, bhoti inogona kurwisa hutachiona hwekurwisa hutachiona hunoita ma PC kana chipangizo chefoni - genuine stolen passport. Saizvozvowo, bhoti inogona kurwisa sevha inokonzera kuipa kwakawanda sekurwisa DDoS. Mawebhusayithi akawanda akaita seGoogle uye PayPal anotarirwa neBob kuti agadzirise mabasa avo. Zvizhinji zvezviitiko zvekutsvaga zvakagadzirwa nemunhu zvinoenderana nekushandiswa kwebhodhi. Hackers nevamwe vanhu vane vavariro dzakaipa vanogonawo kushandisa bots kuti vaite rusununguko rwe internet. Bhoti haisi yakaipa software asi ine basa rinokosha rekubiridzira kwepaInternet dzakawanda. Somuenzaniso, mamwe mawebsite ane mabhoti anogona kukonzera ruzivo rwekadhi rechikwereti kubva kuvashandi vakawanda.
Wakaitwa Abgarian, Mutungamiriri Mukuru weVatengi vekubudirira Semalt , anopa pano zvimwe zvinotambudza panyaya iyi.
Mabhenetet akaumbwa sei
Mumwe angashamisika kuti chii chinonzi botnet traffic, uye chinogona kuita. Bhatikiti inosanganisira boka kana mutsara we "zombie makombiyuta" anoshanda pamwechete kuita basa rakafanana. Mabhoti mazhinji kana makemikari akabatwa neBob angaita sevaZombie pamhando dzakasiyana dzemhinduro dzeeva. Kazhinji, anorwisa anotarisa zviitiko zvekunetseka kune anenge atambudzwa kana kuti chinangwa. Kubva pano ivo vanotarisa kuisa software pane kombiyuta yaanotambudzwa. Kazhinji, vanhu vanoshandisa spam emails kutumira bots kuvanhu makombiyuta. Vanobva vanyengedza munhu wacho mukukanda bhodhi-call-action iyo inotanga kurwisa kwose. Zvimwe zvinotyisa zvinotumira spam emails ane malware neTrojans..
Kana bhodhi ichiiswa pane kombiyuta yaanotambudzwa, ikozvino iko kushandisa purogiramu yePC inoshandiswa kuti iite zvinorwisa. Somuenzaniso, vanobatana nevanowanzoita sevasipi uko mirairo nemirayiridzo inopinda. Munhu ari shure kwekutsvaira kwebhokisi anoshandisa mutemo-uye-kutungamirira (C & C) sevhaya kuti atore chero ruzivo rwavanoda kubva kumichina yakagadzirirwa.
Inoshandisa webhusaiti iyo inoshandisa botnet chirongwa cheklayiti iyo inenge yakagadzirirwa mirayiridzo yebhodhi. Iyi mabasa inogona kusanganisira kuunganidza deta, kushandiswa kwevashandisi (passwords, makadhi emakadhi, logins, uye cache), kudzora kombiyuta kana kunyange kushandisa computer yeakakuvadzwa hardware. Chimwe chekushandurwa kwezvinhu zve botnets kunosanganisira kukwanisa kudzora mamwe bhomwe imwe kana akawanda.
Botnets inopesana nehutano hwekutsvaga mawebsite akawanda. Ruzivo uye kuchengeteka kwekutsvaga kwezvinhu zvinosvibiswa nehutaneti hwemabhodaneti Apo bhotela rinosungira malware paPC yemunhu, ruzivo urwu haruri pasi pekutonga kwemushandisi. Vanhu vanochengetedza ruzivo rwakakosha semazere ezvemari, ruzivo rwebhangi, zvinyorwa zvekutumira, nezvimwe; pane utachiona hwehutachiwana hunogona kutadza kuparara kune vanorwisa.
Vanopikisa vanogonawo kurwisa semakombiyuta akawanda zvichiita nekuda kwezvikonzero zvavo. Semuenzaniso, kutengesa kwebhodnet kwakarambidza kuramba kwekurwiswa kwebasa pamagetsi. DDoS kushorwa kunosanganisira kutumira maitiro akawanda ewebhu kune sevha, nekuderedza kushanda kwaro nekuda kwekugadzirisa. Mune zviitiko zvakanyanya, vanhu vanoderedza pasi rese webhusaiti nemaitiro aya.
Botnet motokari inowanzoshandiswa mumashandisi ezuva nezuva. Semuenzaniso, vanhu vanogona kutora botnet kutambudza kuumba chitengesi chakaipa kana kutumira spam. Ichi SEO chinyorwa chine ruzivo rwakadai sokuti chii chinonzi botnet mumugwagwa. Iwe unogona kukwanisa kuchengetedza hurongwa hwako kubva pamigumisiro yezvirongwa zvekutsvaga kwebhokisi.